Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga uRo - I-Airbnb
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga uRo
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga uRoberta ikwiValdidentro 500 m ukusuka kwilifti ye-ski ekufutshane. Uza kuba neWiFi yasimahla, ikhitshi elinento yonke, igumbi lokulala negumbi lokuhlambela elineshawa nomatshini wokomisa iinwele. Igalaji yasimahla yeebhayisekile nezithuthuthu yeyakho. Uza kufumana ii-ski lockers ezifudumeleyo kwisayithi. Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga iRoberta ikwindawo entle kakhulu yokufikelela kumanzi ashushu aseBagni Vecchio, eBagni Nuova naseTerme di Bormio.
Indawo ethe cwaka nezolileyo ilungele abo bafuna ukuchitha iintsuku ezimbalwa bephumle ezintabeni zethu...
Ukuhamba lula, 200 m, unokufumana ibhari, ivenkile yokutyela, i-pizzeria
Indlela yokuhamba ngeenyawo nebhayisekile phambi kwendlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga...
Malunga neekhilomitha eziyi-1 ukusuka apho uza kufumana ivenkile enkulu, ivekile, i-newsstand, amayeza, iofisi yeposi, i-ATM... Sisekude ngeekhilomitha eziyi-6 ukusuka eBormio kunye neekhilomitha eziyi-30 ukusuka eLivigno.
Kubathandi bezemidlalo nabasebusika, kufutshane, unokuqesha izinto zokutyibiliza kwikhephu ukuze kube lula ukuba kufutshane neelifti ze-ski eziyi-500 m ukusuka kwindlu yethu yeholide eyakhiwe ngamaplanga...
Amathuba okuqesha iibhayisekile okanye iibhayisekile ukuze ukwazi ukufikelela, ngeentsuku ezimnandi zasehlotyeni, iCancano Lakes iikhilomitha eziyi-11 ukusuka kwindlu yethu yeholide eyakhiwe ngamaplanga, iStelvio Pass iikhilomitha eziyi-25 kunye nezinye iindlela ezintle onokuzibona.
Inombolo yomthetho: CIR: 014071-CNI-00021